ဖော်ပြပြီးသတင်းများ | Ministry of Border Affairs
ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) အနေဖြင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာစေရေးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ အာဟာရပြည့်ဝစေရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
by Thinmbadm1n / Sep 29, 2016 / comments
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် သန်းထွဋ် ထိုင်းနိုင်ငံ တရားရေးဝန်ကြီး၏ အကြံပေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ရုံး (ONCB) အကြံပေး Mr. Permpong Chaovalit ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်အား ထိုင်းနိုင်ငံ တရားရေး ဝန်ကြီး၏ အကြံပေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ရုံး (ONCB) အကြံပေး Mr . Permpong Chaovalit ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နေ့လည် (၂) နာရီအချိန်တွင် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင် အာဆီယံ-အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် (၆၇) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး၏ အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်
အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
by Thinmbadm1n / Sep 26, 2016 / comments
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) မူလတန်းဆရာအတတ်သင် သုံးနှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၅) သင်တန်းဆင်း
by Thinmbadm1n / Sep 23, 2016 / comments
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်သည် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက် ၉နာရီက ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) ၌ ကျင်းပသည့် မူလတန်းဆရာ အတတ်သင် သုံးနှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၅) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ဆုံမှာကြား
by Thinmbadm1n / Sep 22, 2016 / comments
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင် သည် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ခွင့်ပြု လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများအား ယနေ့ နံနက် (၁၀) နာရီအချိန်တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်မ၌ တွေ့ဆုံပါသည်။
နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲနိုင်အား Malteser International ၏ Country Director ဖြစ်သူ Mr.Gerhard Serafin လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Sep 21, 2016 / comments
နေပြည်တော် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် (UNDP) ၏ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ် (၂၀၁၃-၂၀၁၇) အောက်ရှိ မဏ္ဍိုင်-၁၊ ရလဒ်-၅ ဖြစ်သည့် လူမှုအသိုက်အ၀န်းအတွင်း သဟဇာတဖြစ်စေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးကူညီခြင်းလုပ်ငန်း စီမံချက်ဆိုင်ရာ Output Board အစည်းအဝေးကျင်းပ
by Thinmbadm1n / Sep 20, 2016 / comments
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် (UNDP) ၏ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ် (၂၀၁၃-၂၀၁၇) အောက်ရှိ မဏ္ဍိုင်-၁၊ ရလဒ်-၅ ဖြစ်သည့် လူမှုအသိုက်အ၀န်းအတွင်း သဟဇာတဖြစ်စေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးကူညီခြင်းလုပ်ငန်း စီမံချက်ဆိုင်ရာ Output Board အစည်းအဝေးအား (၂၀-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Tango နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှ WFP ၏ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် PRRO-200299 စီမံကိန်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်မှု တွေ့ရှိချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တင်ဒါဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တင်ဒါဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တင်ဒါဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ် (ရန်ကုန်) သို့ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများက ကွန်ပျူတာများပေးအပ်လှူဒါန်း
by Thinmbadm1n / Sep 14, 2016 / comments
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲနိုင် (JICA) ရုံးချုပ်မှ Senior Advisor ဖြစ်သူ Mr. Naomichi MUROOKA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / Sep 12, 2016 / comments
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ လူမျိုးစုရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း သွားရောက်လေ့လာ
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ နယ်စပ်ဒေသ ကျေးလက်နေ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့သည့် ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၄) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေး ကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ လူမျိုးစုရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရောက်ရှိလေ့လာ
by Thinmbadm1n / Sep 06, 2016 / comments
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ လူမျိုးစုရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Dinh Que Hai ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် လေဆိပ် သို့ရောက်ရှိလာရာ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ကြိုဆိုခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ရဲအောင်အား ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား ရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Dinh Que Hai ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Dinh Que Hai ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်လှစ်
by Thinmbadm1n / Sep 05, 2016 / comments
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ၀န်ထမ်းများအား အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်၏ လမ်းညွှန် ချက်ဖြင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် English Language Training for Officials သင်တန်း တက်ရောက် ခဲ့သည့် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးမှ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ၀န်ထမ်းများအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြန်လည်သင်ကြားပို့ချခြင်း သင်တန်းအား ယနေ့နံနက် (၉း၃၀) အချိန်တွင် ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။